राराबाट प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन, व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आब्हान (पूर्णपाठ सहित) - BizKhabar Online
रासस २०७५ वैशाख १ (April 14, 2018) मा प्रकाशित
मुगु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकताबद्ध भई नेपाललाई विकासको मार्गमा द्वूत गतिले अगाडि बढाउन सबैलाई आह्वान गरेका छन् । । नयाँ वर्षका अवसरमा नेपालको ठूलो र मनमोहक रारा ताल रारा किनारबाट आज बिहान देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, राष्ट्रिय हित र समृद्धिका बृहत्तर विषयमा समझदारीका साथ अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
उनले सम्बोधनको क्रममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिवद्धता जनाएका व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा अब आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर आएको बताउँदै मुलुकका समस्या समाधान गर्न सरकार सक्षम रहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘निर्वाचनको सफलतासँगै हाम्रो देश नेपाल, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ मानक स्थापित गर्न सफल भएको छ । इतिहासले हामीलाई आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर प्रदान गरेको छ, हाम्रा अगाडि समस्या थिए, समाधान गर्नुपर्ने दायित्व थियो, उनले भने, ‘अहिले जनताले तिनै समस्या सम्बोधन गर्ने अख्तियारी हामीलाई दिएका छन् ।’
प्रधानमन्त्रीले २०७४ साल महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको साल रहेको उल्लेख गर्दै गत सालमै राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हुँदै जनपक्षीय, लोकतान्त्रिक, देशभक्त, अग्रगामी तथा विकासप्रेमी सरकार मुलुकले पाएको बताए । उहाँले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधान सफल कार्यान्वयनको बाटामा अघि बढ्दै स्थायित्वको नयाँ चरण आरम्भ भएको पनि बताए । ‘अहिले पनि के नेपाल बन्छ ? के यो सरकारले हाम्रा सपना पूरा गर्छ’ भन्ने प्रश्न आफूले पटक पटक सुन्दै आएको बताउँदै उनले भने, ‘नेपाल बन्छ, बनाउनैपर्छ । हो, हरेक चिजको आयु र अवधिको सीमा हुन्छ । मान्छेको ज्ञान र सामथ्र्यको पनि सीमा हुन्छ । तर इमानको कुनै सीमा हुन्न, निष्ठाको कुनै निर्धारित आयु छैन । इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनै अतिरिक्त प्रशिक्षणको पनि खाँचो पर्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई पछाडि पार्ने सामन्तवाद अब इतिहास भइसकेको, पराधीन बनाउने सोचहरु कमजोर भएको र विभाजित गर्ने शक्तिहरु किनारा लागेको उल्लेख गरे । राष्ट्रहरुबीचको सम्बन्धलाई आकार, जनसंख्या र अर्थतन्त्र सानो या ठूलो हुने कुराले होइन, सार्वभौम समानताको विषयले तय गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा छिमेकी, सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गरिने बताए ।
१ .नयाँ वर्ष २०७५ को शुभारम्भमा म यहाँहरु सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
२. नयाँ वर्षको पहिलो बिहानी प्रकृतिको यस अनुपम सिर्जना राराको आँगनमा उभिएर यहाँहरुलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको छ । रारा आफैँमा प्रतीक हो– हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्य र वैभवको, हाम्रो सम्भावना र भविष्यको । अपरिमित प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा, अनेकौँ सामाजिक र जैविक विविधता र जीवन्त एवं स्वाभिमानी जनता–समृद्धिका लागि आवश्यक सबै कुरा हामीसँग छन् । तर अर्को पृथक परिदृष्य पनि मेरा आँखामा नाचिरहेको छ– नानीहरुका लागि गतिला विद्यालय र त्यहाँसम्म पुग्न भरपर्दा बाटा र पुल छैनन । सुत्केरी व्यथाले च्यापेका आमाहरुलाई बचाउन हामीसँग पर्याप्त मानवीय र भौतिक संसाधन छैनन् । कर्णालीलगायत नदी अविरल बगिरहेका छन्– तर गाउँ बस्ती अँध्यारै र खेतबारी बाँझै छन । अनि गर्भभित्र अपार सम्भावना बोकेर पनि मानव सूचकाङ्कको पुच्छारमा रहेको यो कर्णाली प्रदेश ठूलो सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको पर्खाइमा छ ।
३. नयाँ वर्षको आरम्भ कर्णाली प्रदेशबाट हुनुको एउटा अर्थ, हामी आज कहाँ उभिएका छौँ, हाम्रो यात्रा कुन हो र हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संकल्पलाई स्पष्ट पार्न पनि हो । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को हाम्रो संकल्पलाई कर्णालीसँगै सिङ्गो नेपालको समृद्धिले मात्रै सार्थक तुल्याउन सक्छ ।
५. अन्योल र अनिश्चयका बीचमा, हिंसा र अस्थिरताका प्रयासलाई छिचोल्दै गतः मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा यहाँहरुले हाम्रो पार्टी र वामपन्थी–लोकतान्त्रिक चुनावी तालमेलका पक्षमा अपूर्व विश्वास प्रकट गर्नुभएको छ । यस विश्वासलाई मैले हाम्रो आगामी यात्राको मार्गदर्शन र अग्रगतिका लागि ऊर्जाका रुपमा लिएको छु । यसका लागि म सम्पूर्ण मतदाताप्रति आभार प्रकट गर्दछु । मलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित गर्ने हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र), विश्वासकोमत दिने सबै दल र सांसदहरु तथा बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्ने स्वदेशी–विदेशी मित्रप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
७. विसं २०७४, उथलपुथल र घटनापूर्ण सालका रुपमा रह्यो । विसं २०७४ महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको साल रह्यो । विसं ०७४ मै राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भयो र जनपक्षीय, लोकतान्त्रिक, देशभक्त, अग्रगामी तथा विकासप्रेमी सरकार मुलुकले पायो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधान सफल कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्यो । देशमा स्थायित्वको नयाँ चरण आरम्भ भयो । यसरी निर्वाचन हुन नदिने, संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्ने र मुलुकमा अन्त्यहीन अस्थिरता सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास विफल भएका छन । निर्वाचनको सफलतासँगै हाम्रो देश नेपाल, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ मानक स्थापित गर्न सफल भएको छ । इतिहासले हामीलाई आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर प्रदान गरेको छ । हाम्रा अगाडि समस्या थिए, समाधान गर्नुपर्ने दायित्व थियो । अहिलेजनतालेतिनैसमस्या सम्बोधन गर्ने अख्तियारी हामीलाई दिएका छन । विगतमा जनताको चाहना र संसदको अंक गणितको वीचमा रहेको खाडल यसपटक पुरिएको छ । समृद्धिको आधारशीला खडा गर्ने यस युगीन दायित्व सुम्पनुहुनेयहाँहरुप्रति पुनः एकचोटी कृतज्ञता जाहेर गर्दछु।
८ केनेपाल बन्छ? के यो सरकारले हाम्रा सपना पूरा गर्छ भन्ने प्रश्नहरुमा मैले पटक–पटक भन्दैआएको छु– नेपाल बन्छ, बनाउनैपर्छ । हो, हरेक चिजको आयुर अबधिकोसीमा हुन्छ । मान्छेकोज्ञान र सामथ्र्यको पनि सीमा हुन्छ । तर इमानको कुनै सीमा हुन्न, निष्ठाको कुनैनिर्धारित आयुछैन । इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनैअतिरिक्त प्रशिक्षणकोपनि खाँचोपर्दैन ।
९. झण्डै तीन बर्ष अघि प्रधानमन्त्रीका रुपमा व्यवस्थापिका–संसदलाई अन्तिम संवोधन गरिरहँदा मैले भनेको थिएँ– यो समयको अन्त्य होइन, प्रक्रिया चालु छ र हामी यहीँ छौं १’ त्यतिबेला हामीले रोपेका विरुवा हुर्काउने, देखेका सपनालाई मूर्त रुप दिने र परिकल्पनालाई व्यवहारमा लागूगर्ने समय पुनः हाम्रा सामुआएकोछ । हामी एकतावद्ध भएका छौं । जनताको भरपर्दो साथ छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहसम्मैजनताकोविश्वास प्राप्त प्रतिनिधिहरु नयाँ उर्जाका साथ काम गर्न तत्पर हुनुहुन्छ । नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरु पर्खाइमा छन् । हामी, बिना कुनैबहाना र विलम्ब तीव्र बेगमा अगाडि बढ्नेछौं ।
१२. नेपालको भविष्य सुदृढ र उज्वल छ । नेपाललाई पछाडि पार्ने सामन्तवाद अब इतिहास भइसकेकोछ । पराधीन बनाउनेसोचहरु कमजोर भएका छन्। विभाजित गर्ने शक्तिहरु किनारा लागेका छन्। राजनीतिलाई सत्तारोहण र जिम्मेवारीलाई निजी या सङ्कीर्ण समूहगत स्वार्थपूर्तिकोभ¥याङ ठान्नेचिन्तन पराजित भएकोछ । अब विकास या समृद्धिको विषय कुनै अमूर्त वैचारिक मन्थन या सुदूर भविष्यकोकाल्पनिक कथा रहेन । किनभने युग बदलिएकोछ, तदनुरुप हाम्रो जिम्मेवारी पनि बदलिएकोछ । निरङ्कुशतन्त्र र अधिनायकवाद विरुद्ध अब्बल ट साबित हाम्रा पौरखहरु अब गरिबी, वेरोजगारी, पछ्यौटेपन, विभेद र अविकासका विरुद्ध केन्द्रित हुनेछन ।
१३. सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा एवं सम्बर्धन सरकारको सर्वोपरी कत्र्तव्य हुने छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा छिमेकीहरु, सबै मित्र राष्ट्रहरु र अन्तररााष्ट्रिय समुदायसँग घनिष्ट सम्बन्ध विकास गरिनेछ । सार्वभौमिक समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक हित, आपसी सम्मान र विश्वास हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार हुने छ । देशप्रेम र न्यायोचित राष्ट्रिय हितलाई खोक्रो राष्ट्रवाद ठान्नेहिनग्रन्थी कसैलेपाल्न हुँदैन भन्नेम ठान्दछु । राष्ट्रहरु बीचको सम्बन्धलाई आकार, जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्र सानो या ठूलो हुनेकुराले होइन, सार्वभौम समानताको विषयले तय गर्छ । सरकारलेराष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा, स्वाभिमान र पहिचानलाई उँचो बनाउनेछ ।
१४. लोकतन्त्र, शासन प्रणालीको मात्रै नाम होइन । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि अनेकौं दशक बलिदानी आन्दोलनमा होमिएका हाम्रा लागि लोकतन्त्र जीवनपद्धति हो, जीवनमूल्य समेत हो । पाँच दशकभन्दा बढी लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा खर्चेको आफ्नो उर्जाशील समय र डेढ दशकको मेरो कारावास म यहाँचर्चा गर्न चाहन्न । तर दुनियाँमा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता स्थापित नहुँदै हाम्रा पुर्खाले अंगिकार गरेको आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र उनीहरुमार्फत शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने अद्वितिय विधिको भने यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र हामी नेपालीका लागि कसैले सापटीमा दिएकोविधि नभएर जीवनपद्दति नै रहेको प्रसंगमा मैले अक्सर शाक्य गणतन्त्र र लिगलिगकोटकोदौडबाट राजा छान्नेउदाहरण दिनेगरेकोछु । पहलकदमी र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नेलाई नेता छान्ने सांगठनिक विधि म अध्यक्ष रहेको पार्टीले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबै हिसावले अपनाउँदै आएको जगजाहेरैछ ।
१५. यस सरकारका कामहरु लोकतन्त्र मानव अधिकार र खुल्ला समाजको अवधारणाबाट निर्देशित हुने छन । सरकारका कार्यक्रमहरु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जरैसम्म सुदृढ गर्ने दिशामा परिलक्षित हुनेछन । प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई सक्षम, सुदुढ र आत्मनिर्भर बनाउन विशेष भूमिका खेलिनेछ । सहकारिता, समन्वय र एकताकोआधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकास गरिनेछ । राज्यका नीति निर्माणमा जनताको भूमिका अझ प्रभावकारी होस्, कानुनी हिसाबले मात्र होइन, राज्य यथार्थमै जनताप्रति उत्तरदायी, जनताबाट सञ्चालित र जनताको सेवामा समर्पित होस्भन्नेकुरा सुनिश्चित गरिनेछ ।
१७.बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक सामाजिक बनोट हाम्रो विशेषता मात्रै होइन, सामाजिक सम्पदासमेत हो । विविधता, बहुलता, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक सहचार्य हाम्रो समाजको विशेष पहिचान हो । यसैमाथि अडेको छ हाम्रो बलियो राष्ट्रिय एकता । तर यसलाई खल्बल्याउने, गरिबी, बेरोजगारी र अविकासजस्ता मुख्य मुद्दाबाट ध्यान बर्गेल्ने र त्यस अप्रिय परिस्थितिलाई दुरुपयोग गर्दै सामुदायिक सद्भावका ठाउँमा अविश्वास, सामाजिक द्वेष र घृणा फैलाउने प्रयास पनि यदाकदा देखापर्ने गरेका छन । यस्तो कुरा नेपाल र नेपालीलाई स्वीकार्य हुने छैन । सामाजिक सद्भावमाथि आधारित बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि सरकार दृढ संकल्पितरुपमा प्रस्तुत हुनेछ ।
२०. अबको हाम्रो सर्वोपरि राष्ट्रिय अभिभारा, संकल्प र कामको केन्द्रबिन्दु आर्थिक समृद्धि हो । विगतका गुमाइएका मूल्यवान समयको समेत शोधभर्ना गर्न आर्थिक विकासको गतिलाई असाधारण तीव्रता दिइनेछ । हामीले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नत गर्नुछ र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यका १७ लक्ष्य तथा १६९ सहायक लक्ष्यका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नु छ । कतिपयलाई यो उद्घोष महत्वाकांक्षी लाग्न सक्छ । तर उच्च आकांक्षा नलिइकन, त्यसका लागि जोखिम नमोलिकन र त्यस निम्ति नयाँ नीति, संरचना र शैलीको अवलम्बन नगरीकन कुनै पनि राष्ट्रले फड्को मार्न सक्दैन । यसलाई हामीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारामा अभिव्यक्त गरेका छौँ । सरकार विकासका गतिलाई योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ । त्यसका निम्ति देशभित्रको प्राकृतिक र मानव स्रोत, पूँजी र सीप परिचालन गर्न सबै सामथ्र्यका साथ सरकार केन्द्रित हुनेछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । ज्ञ अबका सहकारीहरुले उत्पादनको ढाँचा र उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तन र आधुनिकीकरणको वाहकको भूमिका खेल्नु पर्नेछ । तसर्थ, सहकारीहरु समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार हुनेछन् । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई महत्वका साथ अघि बढाइनेछ । यस प्रसंगमा हामी एक्लैकाफी छौँ भन्दैनौँ, छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरु, वैदेशिक लगानीकर्ताहरु तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग हातेमालो गरिनेछ । त्यसैले म यहीँबाट आह्वान गर्दछु, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु ढुक्कसँग लगानी गर्नुहोस । पारदर्शी कर, श्रमिकहरुको हित र वातावरणीय पक्षप्रति संवेदनशील हँुदै समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानमा योगदानका लागि सरिक बन्नुहोस । तपाईको लगानी र मुनाफाको सुरक्षाप्रति सरकार सजग छ, अनावश्यक कानूनी र प्रशासनिक झण्झट अब तपाइँहरुले सामना गर्नु पर्ने छैन । कुनैअतिरिक्त सेवा सुविधा र कमिशन दिन नसकेका कारण लगानीको अवसर प्राप्त नहुने या लगानी फिर्ता लैजानेजस्ता विगतका वाध्यता सामना गर्नुपर्ने छैन । आन्तरिक र बाह्य लगानीमा सन्तुलनको नीति सहित लगानीको सुरक्षा, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण तथा मुनाफाको व्यवस्थापन लगायतमा प्रचलित व्यवस्थाहरुलाई सहज र छरितो बनाइनेछ । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा हाम्रो जोड रहनेछ ।
२५. शिक्षालाई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग आबद्ध गर्दै यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न तथा युवाहरुलाई आत्मनिर्भर तथा प्रतिष्पर्धी क्षमतायुक्त बनाउन पुनसंरचना गरिने छ । मैले पद बहाल गरेकै क्षण सबैपालिका तहमा एक÷एक वटा प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छु । हाम्रो शिक्षालाई काम र रोजगारीसँग आबद्ध गर्न प्राविधिक र साधारण शिक्षामा ‘सत्तरी–तीस’को अनुपातमा व्यवस्थित गर्ने नीति हामीले लिनेछौँ । जतिबेला बाँकी दुनियाँ अन्धकारमा थियो, अक्षर हुन्छ भन्ने जान्दैन थियो, त्यतिबेला पनि हाम्रा पुर्खा जीवजन्तु, वनस्पती, प्रकृति, भूगोल र खगोलको अध्ययन गर्थे । कला, संस्कृति र साहित्यको सिर्जना गर्थे । ज्ञानको उत्पादन संग्रह र विस्तार गर्थे । ती ज्ञानी, ती ध्यानि, ती विद्वान ऋषि र मुनिका सन्तान आज निरक्षर र अनपढ हुने, स्कूल जान नपाउने रु विद्यालय भन्ने शव्द, भाव र व्यवहारको सिर्जना जहाँ भयो, तिनका सन्तान विद्यालयमा जान नपाउनेरु अब यो चल्न सक्दैन । म कवि महानन्द सापकोटालाई स्मरण गर्छु, “विधिको यदि त्यही विधान छ भने अब त्यो विधिको पनि आयु पुग्यो पुनः एकपटक जोड दिन चाहन्छु– अब हाम्रा बालबालिका स्कुल जान्छन । ऋषिमुनिका सन्तान अब स्कुल जान्छन, जान्छन्न १ अबदेखि कुनै पनि बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहने र आर्थिक अभावका कारण बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ । शिक्षालाई प्रतिष्पर्धी, गुणस्तरीय र जीवनपयोगी एवं समाज उपयोगी बनाइने छ । यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिका लागि आफ्नो जीवन सहज र सरल हुने अवस्था सिर्जना गरिनेछ । त्यस्तो व्यक्ति समाजका लागि गुणवान् र उपयोगी हुनेछ । त्यसैले त्यस्तो शिक्षा सुलभ र सबैको पहुँचभित्र हुनुपर्छ । शिक्षा, विकासको लागि हो, विकासको लागि कस्ता र कति जनशक्ति चाहिने हो, त्यसको योजनाबद्ध मानव स्रोतको प्रबन्ध व्यवस्थितरुपमा गरिनेछ । समयले देशको विकासका लागि माग गरेको जनशक्ति उपलव्ध गराउनु शिक्षाको उद्देश्य हो । निकट भविष्यमा शिक्षासम्बन्धी विस्तृत विवरण र कार्यक्रम तयार गरी सोही बमोजिमका ेशिक्षा नीति लागू गरिने छ ।
२८.कर्णाली प्रदेशको यो सुन्दर स्थानबाट सम्बोधन गरिरहँदा प्रथा र प्रचलनका नाममा हुने गरेका महिलाविरुद्धका केही घटनाहरु स्मरण गरिरहेको छु । जेसुकै तर्क वा कारणबाट होस्, अब महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढंगले अन्त्य गरिनेछ । बालविवाह, बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गरिनेछ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत पूर्णरुपमा उन्मूलन गरिनेछ । कर्णालीलगायतका दुर्गम प्रदेशका जनतालाई विकासको औशत राष्ट्रियस्तरसम्म पु¥याउन राज्यबाट विशेष कार्यक्रम लागूगरिनेछ । तराई–मधेशमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अविकासको समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ ।
३०. अनेकौँ आरोहअवरोह, सफलता विफलता र एकता–विभाजनका शृङ्खला पार गर्दै नेपाली राजनीति आज यस महत्वपूर्ण बिन्दुमा आइपुगेको छ । सामन्ती राज्यप्रणाली, निरंकुश शासन व्यवस्था, द्वन्द्व, अस्थिरता, संक्रमणकाल र भ्रष्टाचारलगायत अनेकौ कारक तत्वहरुले गर्दा मुलुकले आजसम्म विभिन्न पीडा भोग्न बाध्य भयो । अब इतिहासको पाना बदल्ने बेला भएको छ । संयोगवश, नयाँ इतिहास निर्माणको यस ऐतिहासिक बिन्दुको नेतृत्व गर्ने अवसर तपाइँहरुको अपार माया पाएर व्यक्तिगतरुपमा म, हाम्रो सरकार र वामपन्थी गठबन्धनलाई प्राप्त भएको छ । तीव्र रुपमा परिवर्तन भइरहेको विश्व, हाम्रै भू–राजनीति र समग्र परिवेशले हामीलाई स्थायित्व र समृद्धिका दिशामा बेगका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरिरहेका छन ।
३१. निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अपरिहार्य विशेषता हो । यस्तो प्रतिष्पर्धा राज्यसञ्चालनका लागि जनताबाट वैध आदेश प्राप्त गर्नका लागि हो । एकचोटी त्यस्तो जनादेश प्राप्त भएसँगै निर्वाचनकालीन प्रतिष्पर्धाको ठाउँ निर्माणमा सहकार्यले लिन्छ, लिनुपर्छ । निर्वाचनमा प्राप्त बहुमत दम्भ र वर्चस्वका लागि होइन । त्यसरी नै, प्रतिपक्षीकोस्थान पनि अन्त्यहीन विरोध, असहयोग या कटुताका लागि होइन । म विनम्रताका साथ मुलुकमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरुलाई लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, राष्ट्रिय हित र समृद्धिका वृहत्तर विषयहरुमा समझदारीका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछु । आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरु १ म तपाइँहरुलाई आत्मविश्वासका साथ भन्न चाहन्छु– पाँच वर्षपछि नयाँ निर्वाचनमा तपाइँहरुका अगाडि आइपुग्दा हाम्रा काम र उपलब्धिहरुले तपाइँहरुलाई आफ्नो अमूल्य मत सही ठाउँमा परेको रहेछ भन्ने विश्वास दिलाउने छन । पाँच वर्षभित्रैमा देशको मुहार स्पष्ट अनुभूत हुने गरी बदलिने छ, सकारात्मक दिशामा । यसमा आश्वस्त हुन र नयाँ सरकारका काममा आवश्यक सुझाव, चासो र सहयोग पु¥याउनुहुन अनुरोध गर्दछु । हामी सबै एकताबद्ध भई नेपाललाई विकासको मार्गमा द्रुत गतिले अगाडि बढाउन सकौँ, यही चाहनासहित आजैबाट प्रारम्भ भएको विसं २०७५ स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुका लागि सु–स्वास्थ र सफलताको वर्ष हुन सकोस,मेरो हार्दिक शुभकामना । धन्यवाद १
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘चेम्बरले जिउ हल्लाउँदा एफएनसीसीआई र सिएनआईलाई सकस भएको छ’ महिला चेम्बरको यसरी गरे प्रशंसा
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि टिचिङ अस्पतालमा
ओली सरकारको ५ महिने उपलब्धी सार्वजनिक, सिण्डिकेट अन्त्यदेखि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्म
एफएनसीसीआईले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भन्यो, सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन सकेन
प्रधानमन्त्रीले संसदमा भने, यसकारण घटेछ नेप्से परिसुचक, अब आत्तिन पर्देन’
कम्युनिष्ट सरकारका मन्त्रीसँग ५०६ तोला सुन, राज्यमन्त्री बुढा एक्लै १५० तोला सुनका मालिक